အီရန်မှာ အမေရိကန် ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြ
11/02/2012 10:26:00 PM
ရခိုင်ပါတီ(၂)ခုအား ကော်မရှင်က ခေါ်ယူ သတိပေး
တစ်ကျောပြန်ဖြစ်ပွားလာသည့် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီများအနေဖြင့် မတည်ငြိမ်မှုများအား
ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းေ ပးရန် နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မ ရှင်က နိုဝင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့က ခေါ်ယူအ သိပေးခဲ့ ကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတ်ီက သိရသည်။
11/02/2012 10:09:00 PM
အရှေ့နှင့်အနောက် ရေနံလုပွဲတွင် ကွင်းသစ်ဖြစ်လာသော မြန်မာနိုင်ငံ
(Oil Price.com မှ 1 Nov 2012 ရက်စွဲပါ “Myanmar: New frontline for East-West oil rush ” သတင်းကို ဘာသာပြန်ဆိုသည်)
ကြိုဆိုပါသည်။ တရုတ်တို့အတွက် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထွက်ပေါက်ဖြစ်ပြီး၊ ရေနံဓါတ်ငွေ့သိုက်များစွာကြွယ်ဝသောမြန်မာနိုင်ငံသည် အမေရိကန်၏ အာရှမူဝါဒနှင့် တရုတ်၏ စွမ်းအင်ဖူလုံရေးမူဝါဒတို့အတွက် အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်း ဖြစ်နေသည်။ ထို့အပြင် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော တပ်မတော်အစိုးရကအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး၊ တရုတ်တို့၏ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအချက်အချာနေရာတွင် မီးလောင်နေသောအဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားနေသည့် ဒေသဖြစ်သည်။
11/02/2012 10:01:00 PM
အရှေ့အလယ်ပိုင်း တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၌ SSPP/SSA ရုံးဖွင့်မည်
ခိုလမ် အဝင်လမ်း (Photo: Facebook)
သျှမ်းပြည်တပ်မတော်-မြောက်ပိုင်းဟု လူသိများသည့် သျှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ/သျှမ်းပြည်တပ်မ တော် SSPP/SSA က အရှေ့အလယ်ပိုင်း တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၌ ရုံးဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
11/02/2012 06:36:00 PM
ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ မြို့တော်၌ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွါး
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ မြို့တော်နမ့်ဆန်မြို့ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ မြို့တော်နမ့်ဆန်မြို့တွင် ယနေ့ မနက်ပိုင်း က မီးလောင်ရာ နေအိမ် ၅၀ ခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း ဒေသခံများကပြောပါသည်။
11/02/2012 06:34:00 PM
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက် အများပိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း အများပြည်သူသို့ ကြေညာ
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်အများပိုင် ကုမ္ပဏီ လီမိတက်ကို
နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများနှင့်အညီ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပုဂ္ဂလိကဏ္ဍအနေဖြင့် ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင် ရွက် ရန် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေနှင့်အညီ Read more »
11/02/2012 03:53:00 PM
အိန္ဒိယ နိုင်ငံသည် ဒုံးပျံစမ်းသပ် ပစ်ခတ်မှု များကို ယခုနှစ် အတွင်းပြုလုပ် သွားမည်ဟုဆို
ကာကွယ်ရေးနှင့် သုတေသန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဖွဲ့သည် ရေငုပ် သင်္ဘောပေါ်မှ ပစ်လွှတ်နိုင်သော K-15 ဒုံးပျံအား ပထမ အကြိမ် စမ်းသပ်မှု အပါအဝင် ပြည်တွင်းထုတ်ဒုံးပျံများအားစမ်းသပ် ပစ်လွှတ်မှုများ လုပ်ဆောင်ရန် အစီအစဉ် ရေးဆွဲထား သည်ဟု နိုဝင်ဘာလ Read more »
11/02/2012 03:39:00 PM
ယခုနှစ် အာဆီယံ ၁၀၀ ခေါင်းဆောင်မှုဖိုရမ်ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပမည်
ယခုနှစ် အာဆီယံ ၁၀၀ ခေါင်းဆောင်မှုဖိုရမ်ကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၌ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နှင့် ၆ ရက်များတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ် ဖိုရမ်၏ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်မှာ “Turbulent World. Rising Asia. Where do we go from Read more »
11/02/2012 03:29:00 PM
ဂျပန်နှင့် အမေရိကန် ပူးပေါင်း စစ်ရေး လေ့ကျင့်မည် ဟုဆို
တရုတ် ပင်လယ် အတွင်းရှိ ကျွန်း ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ် နိုင်ငံနှင့် ဂျပန် နိုင်ငံတို့ အကြား အခြေအနေ တင်းမာ နေစဉ် ထပ်မံ၍ တရုတ် နိုင်ငံအား စိတ် မသက်မသာ ဖြစ်စေမှု အဖြစ် အမေရိကန်နှင့် ဂျပန် တို့သည် နှစ်နိုင်ငံ ပူးတွဲ စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှု Read more »
11/02/2012 03:15:00 PM
ဦးခင်ညွန့် အမျိုးသားနိုင်ငံရေး လုပ်မည်ဟု ဆို
ဧပြီလ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဦးခင်ညွန့် ဆန္ဒမဲ လာရောက်ပေးစဉ် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
စစ်ထောက်လှမ်းရေး ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဦးခင်ညွန့်က လာမည့် အနာဂတ်တွင် ပါတီနိုင်ငံရေး လုပ်ဆောင်ရန် မရှိသော်လည်း တိုင်းပြည် တိုးတက်ရေးနှင့် ပြည်သူများ စားဝတ်နေရေး ချောင်လည်စေရန် အမျိုးသား နိုင်ငံရေး လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်သည်။
11/02/2012 03:08:00 PM
မြန်မာ- ဘင်္ဂလာ နယ်စပ် ပင်လယ်ပြင် နှစ်ဘက်နိုင်ငံ ရေတပ်သင်္ဘောများ တိုးချ
ရခိုင်တွင် ပေါ်ပေါက်နေသော ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူများကြောင့် မြန်မာ- ဘင်္ဂလာနယ်
စပ် ပင်လယ်ပြင်တွင် နှစ်ဘက် နိုင်ငံ၏ ရေတပ် သင်္ဘောများ ကို တိုးချကာ လုံခြုံရေး မြှင့်တင် ထားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
11/02/2012 03:00:00 PM
အသက်မပြည့်သေး၍ ကလေးစစ်သားများမိဘထံ ပြန်အပ်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာသတင်းတွေကို မီဒီယာတွေမှာ ဖတ်ရှု့ကာ စဉ်းစားမိပါတယ်။
ဘတ်(စ်)ကားအရှေ့ပေါက်နားမှာ စပါယ်ယာအကူအလေးကို ကြည့်မိရင်း “ဒါတွေဟာ အသက်မပြည့်သေးသူတွေကို အလုပ်ခိုင်းခြင်း၊ သက်ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ ညွှန်းလို.ရမလား၊ မရဘူးလား” စတဲ့ မေးခွန်းများစွာနဲ့ ကလေးငယ်ရဲ. ရှာဖွေနိုင်မယ့် ငွေပမာဏ ဘယ်လောက်များနိုင်မလဲ။ ဒါ့ပြင်ဒီကလေးကို မှီခိုနေရသူများ ရှိနေနိုင်တယ်..။ ဒါဆိုရင် ဒီကလေးငယ်(တွေ) အလုပ်အခိုင်း မခံရအောင် ဥပဒေတွေ… စည်းမျဉ်းတွေ ထုတ်ပြန်တာက ရေရှည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါ့မလား ..။
ဟိုပုံးမြို့တွင် စာရွက်တရွက်အတွက် ကျပ်တထောင် ပေးရ
ရှမ်းပြည်နယ် ဟိုပုံးမြို့တွင် စာရွက်တရွက်တန်ဘိုးက ကျပ်တထောင် ဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုရမည်။မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးဌာနထံမှ ဖုန်းကတ် လပေးစနစ်ဖြင့်
၀ယ်ထားသည့် ၀န်ထမ်းတို့ ပြီးခဲ့သည့် လခထုတ်ရက်အတွင်း ငွေသွင်းရာတွင် "ဘဏ်ချလံခ" ဟု ဆိုပြီး ကျပ်တထောင် ပေးခဲ့ရကြောင်း ဟိုပုန်းဒေသ ၀န်ထမ်းတို့ထံမှ သိရသည်။
11/02/2012 02:49:00 PM
ရမ်းဗြဲမြို့နယ်တွင် ရခိုင်တစ်ဦး ရက်ရက်စက်စက်လည်လှီးသတ်ဖြတ်ခံရ ရမ်းဗြဲမြို့ ရမ်ဘောက်ကုန်တိုက်နယ် ရွေကျေးရွာတွင် နိုဝင်ဘာလ တစ် ရက်နေ့နံနက်(၁၁)နာရီခန့်ကရခိုင်တစ်ဦး သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း ဒေသခံ တစ်ဦး၏ သတင်းပေးပို့ချက်အရ သိရသည်။
11/02/2012 02:37:00 PM
ပြင်သစ်ကလပ် ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်း(PSG)အသင်းသည်ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ် ဒိုနှင့်ဟိုဆေး မော်ရင်ဟိုတို့အား ပေါင်စတာလင်သန်း(၁၀၀)အကုန်အကျခံ ခေါ်ယူရန် စီစဉ်နေကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်
ပြင်သစ်ကလပ် ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်း (PSG) အသင်းသည် ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ် ဒိုနှင့် ဟိုဆေး မော်ရင်ဟိုတို့အား ပေါင်စတာလင် သန်း(၁၀၀) အကုန်အကျခံ ခေါ်ယူရန် စီစဉ်နေကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာ သည်။
11/02/2012 02:20:00 PM
ASEM9 တက်ဖို့ ဦးသိန်းစိန် လာအို သွားမယ်
၉ ကြိမ်မြောက် အာရှနဲ့ ဥရောပနိုင်ငံများရဲ့ အစည်းအဝေး တက်ဖို့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ဦးသိန်းစိန် လာအိုသွားမယ် လို့ သိရပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်က လာအိုကို ၃ ကြိမ် ရောက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ၂၀၀၇ နိုဝင်ဘာ၂၀၀၈ မတ်လ၂၀၁၂ မတ်လ
11/02/2012 01:54:00 PM
ပျားဖွတ်ရန် ပျားအုံလိုက်ရှာရင်း သစ်ပင်တွင်ကြိုးဆွဲချသေဆုံးနေသော လူသေအလောင်းတစ်လောင်းကိုမြင်တွေ့
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မုံရွာ ခရိုင်၊အရာတော်မြို့နယ်၊ဇရစ် ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက် နှစ်ဖာ လုံခန့်ရှိ သနပ်ခါးခြံဝင်းတစ်ခုတွင် ပျားဖွတ်ရန် ပျားအုံလိုက်ရှာသူ တစ်ဦးက သစ်ပင်တွင်ကြိုးချသေ ဆုံးနေသော လူသေအလောင်း တစ်လောင်းအား အောက်တိုဘာ (၂၇)ရက်၊ညနေ (၅)နာရှိအချိန် ခန့်က တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း အရာ တော်မြို့ခံတစ်ဦးက ပြောကြား Read more »
11/02/2012 01:24:00 PM
စီးပွား/ကူးသန်း ဌာနများ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းမည်
ဈေးကွက်သို့ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်မှ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေသည့် စားသုံးဆီများ၊ အရက်တု၊ ကြက်ဥ အတုအပါအ၀င် စားသောက်ကုန်နှင့် ကုန်စည်များစွာ
၀င်ရောက်လျက် ရှိသည် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ တိုးမြှင့်ရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှုများကို ယှဉ်ပြိုင်ရန် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဌာအချို့ ဖျက်သိမ်းပြီး တချို့ကို အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်း၍ အရာရှိနှင့်ဝန်ထမ်း ၂၀၀၀ တိုးချဲ့ခေါ်ယူသွားရန်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
11/02/2012 01:14:00 PM
အလှမယ်လေး နန်းခင်ဇေယျာ ပရဟိတလုပ်ငန်းများစတင်(ဓါတ်ပုံ)
11/02/2012 12:44:00 PM
နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးဌာန နှစ်ခု အမည်ပြောင်း မည်
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ၂ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးက ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေး သို့ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်၊ ရက်စွဲဖြင့် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာန နှစ်ခု အမည်ပြောင်းရန် ယနေ့တွင် သဝဏ်လွှာ တစ်စောင် ပေးပို့လိုက်ကြောင်း The Voice Weekly သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
11/02/2012 12:23:00 PM
"နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ခုံရုံး ၏ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့် ဆို ဆုံးဖြတ်သည် မူလကပင် ပျက်ပျယ်သော အမိန့် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ က ပြည်ထောင်စု သို့ ပေးပို့ အတည်ပြု"
"နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ခုံရုံး နှင့် အဖွဲ့ဝင် များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် မှားယွင်းပြီး ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်မှု မရှိ၍ လည်းကောင်း ယင်းတို့၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်သည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ အရ တရားရုံးတစ်ရုံး၏ စစ်ဆေးစီရင် ချက် အပေါ် ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမဟုတ်၍လည်းကောင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ၃၂၄ တွင် ပြဌာန်းထားသည့် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခုံရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ် အတည်ဖြစ်သည်ဆိုခြင်းမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်သာ သက်ဆိုင်
11/02/2012 11:51:00 AM
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် MBA + Business Placement အစီအစဉ်အား ပထမဆုံးအကြိမ် ကမ်းလှမ်းခံရ
တွင် MBA သင်ယူလိုသူများအတွက် လက်တွေ့အလုပ်အကိုင်နေရာချထားပေးမူ့အပြင်လစာပါရရှိ်မည့် အစီအစဉ်ပါရှိသော MBA+ Business Placement ကို University of Portsmouth တွင် လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန် သတ်မှတ်အရည်အချင်းပြည့်မှီသူများ စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုအသိုင်းအ၀ိုင်းက သိရသည်။
11/02/2012 11:41:00 AM
မလေးရှား UNHCR မှ ဘင်ဂါလီရိုဟင်ဂျာများကိုအသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပေးနေခြင်း
မလေးရှားနိုင်ငံ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) မှ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက် မနေ့မနက် ၈ နာရီမှစ၍ UNHCR မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စ ရပ် များ ကို
မလေး ရှားနိုင်ငံ Cheras Stadium အားကစားကွင်းတွင် စတင်ဆောင်ရွက်ပေးနေရာဘင်ဂါလီရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ၃၀၀၀ ကျော်ခန့်အား
11/02/2012 11:07:00 AM
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများနှင့်ပတ်သက်၍ သင်္ကာမကင်းသူ ၁၀၀၀ ၀န်းကျင်ကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေ
အောက်တိုဘာလအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများကြောင့် ကျောက်တော်၊ မင်းပြား၊ ရသေ့တောင်၊ မြောက်ဦး၊ မြေပုံ၊ စစ် တွေ၊ ကျောက်ဖြူ စသည့်မြို့နယ်များမှ ဒေသခံများ ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့အား သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် ရဲစခန်းများ၌ ခေတ္တ ခေါ်ယူ ထိန်းသိမ်း စစ်ဆေးနေကြောင်း၊ ဖမ်းဆီးထားသူ အများစုသည် ရခိုင်တိုင်ရင်းသားများ ဖြစ်ပြီး မွတ်စလင်များလည်း ပါဝင်ကြောင်း
ဒေသခံများ က ဧရာဝတီ Read more »
11/02/2012 10:45:00 AM
မုန်တိုင်းအလွန် နယူးယောက်နဲ့ သွားလာရေး မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တဲ့ဒဏ်ကို ဆိုးဆိုး ရွားရွားကြုံခဲ့ရတဲ့ နယူးဂျာစီပြည်နယ်ကမ်းရိုးတမ်းဒေသကို
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ က သမ္မတ ဘရက်အိုဘားမား သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး အမေရိကန် ဗဟို အစိုးရအနေနဲ့ အရှည် သဖြင့် ကူညီ ပံ့ပိုးမှုတွေ ပြုလုပ် ပေးသွား မှာဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံပြည်သူလူထု ကိုပြော သွားပါတယ်။ သမ္မတရဲ့ ခရီးစဉ်မှာ ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ခရစ် ခရစ္စတီ လည်း အတူလိုက် ပါသွားပြီး နယူးဂျာစီပြည်နယ်နဲ့ နယူးယောက် မြို့တော်တ၀ိုက်က မုန်တိုင်းဒဏ်ကြုံခဲ့ရတဲ့ သန်းနဲ့ချီ တဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေကို စောင့်ရှောက် အကူညီပေးဖို့ မစ္စတာ အိုဘားမားက တိုက်တွန်း Read more »
11/02/2012 10:35:00 AM
ရုရှား သမ္မတ ဗလာဒီမာ ပူတင် ပြည်တွင်းဖြစ် ကားများကို အသုံးပြု သွားမည်ဟုဆို
ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲခဲ့ ချိန်မှ စ၍ ရုရှား နိုင်ငံမှ ခေါင်းဆောင်များ စီးနင်းခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားဖြစ် ကျည်ကာ ကားများ အစား ပြည်တွင်းဖြစ် ကားများကို အသုံးပြုရန် သမ္မတ ဗလာဒီမာ ပူတင်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Read more »
11/02/2012 10:33:00 AM
ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအား ချေးငွေထုတ်ပေးခြင်းကို ၂၅ နှစ် ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရာမှ ချေးငွေများ ပြန်လည် ထုတ်ပေးသွားရန်ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံအား ချေးငွေထုတ်ပေးခြင်းကို ပြီးခဲ့သော ၂၅ နှစ်တာ ကာလပတ်လုံး ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရာမှာ မကြာခင် ချေးငွေများ ပြန်လည် ထုတ်ပေးသွားရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။ Read more »
11/02/2012 10:24:00 AM
တရားသူကြီးတွေ ဖတ်ဖို့ ကြေးမုံသတင်းစာပါ ကြော်ငြာသတင်း
နေပြည်တော်နဲ့ အနီးတ၀ိုက်က တရားသူကြီးတွေ သတိထားဖို့ နေပြည်တော် တ၀ိုက်က တရားရုံးတွေမှာ ကပ်ထားတဲ့ ကြော်ငြာပါ။ Read more »
ရခိုင်ပဋိပက္ခကြောင့် ရန်ကုန်ရောက် ဒဏ်ရာရသူများ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အားနည်း
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၁ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း တကျော့ပြန် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခ များကြောင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသူ များအနက် ဒဏ်ရာ ပြင်းထန် မှု ကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ ပြည်သူ့
ဆေးရုံကြီးသို့ ပြောင်းရွှေ့ ကုသ နေသော လူနာ ၅ဦး မှာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက် မှု အားနည်း လျက်ရှိကြောင်း ယင်း ဒဏ်ရာ ရသူများကို ကူညီ စောင့်ရှောက် နေ သည့် ရခိုင် အမျိုးသား ကွန်ရက် ထံမှ သိရှိရသည်။
11/02/2012 10:21:00 AM
တရားမဝင် နယ်စပ် ကုန်သွယ်သူများကို အရေးယူမည် မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးနဲ့ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဌာန နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနက နေပြီးတော့ တရားမ၀င် ကုန်တင်ပို့မူတွေ ကျဆင်းရေး အတွက်နဲ့ စားသုံးသူတွေရဲ့ ဘေးအန္တရယ်ကို ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၁ရက်နေ့ကစပြီး တရားမ၀င် ကုန်သွယ်မှု Read more »
11/02/2012 10:19:00 AM
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ သုံးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှု နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့
မှော်ဘီမြို့နယ်တွင် သုံးလောင်ပြိုင်လူသတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် နေအိမ်ကိုတွေ့ရစဉ်
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရှိ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်နှင့် မှော်ဘီမြို့နယ်တို့တွင် သုံးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှု ဖြစ်စဉ်တစ်ခုစီ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
11/02/2012 10:15:00 AM
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက် တည်ထောင်မည်
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၁ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်တွင် ပြည်တွင်းပြည်ပ တက္ကသိုလ် များနှင့် အချက်အလက် များ ဖြန့်ဖြူး နိုင်ရန် အတွက် အွန်လိုင်း စာကြည့်တိုက် တည်ထောင်ရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက် နေကြောင်း ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ တင်ထွန်းက The Voice Weekly သို့ ပြောကြားသည်။
11/02/2012 10:00:00 AM
အသက် ၄ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ဦး ကို မေ့မျော့ သွားသည် ထိ ရိုက်နှက် ခဲ့ မှု မှတ်တမ်းတင်ထား သည့် ဗီဒီယို ယူကျူးပေါ်တွင်ပျံ့ နှံ့တရုတ် ပြည် ဂွမ်ဂျု ခရိုင် ရှိ အထီးကျန်
စိတ်ဝေဒနာရှင် ကလေးငယ်များ စောင့် ရှောက် မှု ဂေဟာ မှ အသက်
၄ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ဦး ကို သင်ကြား ပြသသူ ဆရာမ က ခန္တာ ကိုယ် ကျိုး ပဲ့ မှု
ဖြစ် ပြီး မေ့မျော့ သွားသည် ထိ ရိုက်နှက် ခဲ့ မှု မှတ်တမ်း တင်ထား သည် ဗီဒီယို မှာ တရုတ် အင်တာနက် သုံးသူ များ ကြား တွင် ဒေါသူပုန် ထ စရာ
ဖြစ်နေ ပြီး CNNFOX , Guardian စသည့် မီဒီယာများ တွင် အကျယ်တ၀င့်
11/02/2012 09:59:00 AM
ကနေဒါနိုင်ငံ ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းမှာ ပြင်းအား ၇.၇ ရစ်ချက်စကေး ငလျင် လှုပ်ခတ်သွား
ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းမှာ ပြင်းအား ၇.၇ ရစ်ချက်စကေး ငလျင် လှုပ်ခတ်သွားတာကြောင့် ကနေဒါနိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဟာဝါရီ မှာ ဆူနာမီလှိုင်း ရိုက်ခတ်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငလျင် လှုပ်ပြီးနောက် စနေ့ ညပိုင်းမှာပဲ ဟာဝါရီကျွန်း ကမ်းတလျှောက်မှာ ဆူနာမီ အရေးပေါ် သတိပေးချက် ဥသြသံတွေ ထွက်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဟာဝါရီ ကျွန်း ကမ်းရိုးတန်း
11/02/2012 09:04:00 AM
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကြမ်း လွှတ်တော် ပြင်ဆင်အတည်ပြု မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေမူကြမ်းကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုပေး လိုက်ပါပြီ။ နိုင်ငံတော် သမ္မတရဲ့ ပြင်ဆင်ချက်တွေနဲ့ ပြန်လည် တင်သွင်းလာတဲ့ ဒီဥပဒေမူကြမ်းကို ဒီကနေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ အချိန်အတော်ကြာ ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ပြီးတော့မှ အတည်ပြုခဲ့တဲ့အကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တချို့က ပြောပြပါတယ်။ မကြာခင်
11/02/2012 08:50:00 AM
အမေရိကန်သမ္မတရွေးပွဲ မဲဆွယ်မှု အရှိန်ပြန်ရ Denver လေဆိပ်တွင် ကြိုဆိုသူများကို အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား နူတ်ဆက်နေစဉ် (နိုဝင်ဘာ ၁၊၂၀၁၂)
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အရှေ့ခြမ်းမှာ တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ အားပြင်းဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း Sandy ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဒေသတွေ အတွက် အချိန်ပေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ ဘားရက် အိုဘားမား Barack Obama ဟာ မကြာခင်ကျင်းပတော့မယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြန်အရွေးခံရဖို့ မဲဆွယ်ပွဲတွေ ပြန်လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
11/02/2012 08:49:00 AM
အနောက်သံတမန်များ ရခိုင်သွားရောက်လေ့လာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပဋိပက္ခတွေ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကို ပိုပြီးသိရှိနားလည်ဖို့နဲ့ ဘယ်လိုအကူအညီတွေ ပေးရမယ်ဆိုတာ သုံးသပ်ဖို့အတွက် ဗြိတိန်၊ အမေရိကန်နဲ့ Australia နိင်ငံတို့က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီးတွေ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရောက်ရှိနေပါတယ်။ ခရီးစဉ် ပထမနေ့ဖြစ်တဲ့ Read more »
11/02/2012 08:48:00 AM
အေးမြတ်သူ အလှ ရန်ကုန် ကားဈေးကွက် အတွင်း မော်တော်ယာဉ် ဈေးနှုန်းများ ပျမ်းမျှငွေကျပ် ဆယ်သိန်းနီးပါး ကျဆင်း
ရန်ကုန်ကားဈေးကွက်အတွင်း မော်တော်ယာဉ် အရောင်းအဝယ်များ အေးစက်လျက် ရှိသည့်အပြင် ဈေးနှုန်း များပါ ဆက်တိုက် ကျဆင်း လျက် ရှိကြောင်း မော်တော်...
နေ့ ခင်းကြောင်တောင်ကြီးမှာ စပါးကြီးမြွေရဲ့ မျိုခြင်းကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ လူကတော့ အရက်သမား တစ်ဦးဖြစ်ပြီးမူးပြီး လမ်းဘေးမှာ လဲနေတဲ့အချ...
သက်တော် ၁၀၄ နှစ် ဆရာတော်ကြီးဦးသြဘာသ၏ ဆင်ဖြူတော်ကျောင်းတိုက်သို့ သာသနာပြုမြွေကြီးရောက်ရှိနေ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ လက်ပံတန်းမြို့နယ်၊ ဘီးလင်း တန်း ရပ်ကွက်၊ ပေါက်ကုန်း၊ ဆင်ဖြူတော် ဘုန်းတော် ကြီး ကျောင်း တိုက်(သက်တော...